• एकराज पाठक
काठमाडौँ, २३ असार : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानको एउटा बहुचर्चित तर विवादास्पद एजेण्डा थियो– मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल । उहाँले आफ्ना हरेक सम्बोधनमा भन्नुहुन्थ्यो, मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउँछु तर त्यसको खर्च मेक्सिकोलाई नै तिराउँछु ।
यो एजेण्डाको विश्वसनीयता र सम्भाव्यताको मापन त्यसताका निकै भएको हो । यसरी एकले अर्काे देशका सीमा क्षेत्रमा पर्खाल नै लगाउनेजस्तो काम असम्भव छ भन्नेहरुको जनमत धेरै थियो । उनीहरुले ट्रम्पको यो एजेण्डालाई “हावादारी” भनेका थिए ।
यस्तो असम्भव विषयलाई निर्वाचनको प्रमुख एजेण्डा बनाउने ट्रम्प कसरी अमेरिकाजस्तो देशको राष्ट्रपति बन्ने होलान् भनेर पनि विश्लेषकले टिप्पणी गर्ने गर्दथे ।
त्यस्तै उहाँको अर्काे एजेण्डा अवैध आप्रवासीलाई अमेरिकामा स्थायीरुपमा बसोबास गर्न नदिइने भन्ने पनि थियो । त्यसको दोषी पनि उहाँको नजरमा मेक्सिको नै थियो ।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको पनि डेढवर्ष भइसक्यो । यस समयमा उहाँले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने जग हाल्न सक्नुभएको भने छैन ।
तर पनि यो एजेण्डालाई भने उहाँले जिवीतै राख्नुभएको छ । बेला बेलामा उहाँको भाषणमा अहिले पनि आफ्नो उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नै रहेको बताउने गर्नुहुन्छ ।
मेक्सिकोमा गएको आइतबार सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यहाँका पुराना वामपन्थी नेता आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले जित हासिल गर्नुभएको छ ।
यो जितसँगै यहाँ वामपन्थी शक्तिको पुनः उदय भएको छ । छिमेकमा भएको यो उदयले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पुनः एक पटक झस्काइदिएको छ ।
गत आइतबार सम्पन्न सो चुनावमा यहाँका करिब सात करोड मतदाताले मतदान गरेका थिए । ल्याटिन अमेरिकाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा परिचित मेक्सिको यस क्षेत्रको एक ठूलो तेल निर्यातकर्ता देश पनि हो ।
तर पछिल्लो समयमा भने तेलको मूल्य खस्किएका कारण मेक्सिकोको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कट्टर विरोधी ओब्राडोर राष्ट्रपतिमा विजयी भएसँगै दुई देशबीचको यसै पनि नराम्रो सम्बन्धबारे पुनः चर्चा शुरु भएको छ ।
आफू राष्ट्रपति भएपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन भने छोड्नुभएको छैन । केही महिनामात्र अघि पनि उहाँले मेक्सिकोका नागरिकलाई ‘चर्पीको प्वालजस्ता काम नलाग्ने देशका मानिस’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यो अभिव्यक्तिबाट पनि पछिल्लो समयमा दुई देशबीचको तनाव थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको आप्रवासी नीति अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा सिंगो मेक्सिको नीतिकै विरोधी ओब्राडोरको विजय यस्तो समयमा भएको छ कि यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपतिको आप्रवासी नीतिलाई अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले मान्यता दिएको छ ।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भने ओब्राडोरलाई आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमार्फत बधाई दिनुभएको छ । उहाँले मेक्सिकोको सो निर्वाचनलाई वैधानिक भन्दै नयाँ राष्ट्रपतिसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभएको छ । दुई देशको यो कूटनीतिक अभ्यासकैबीचमा दुवै देशका विश्लेषकको प्रश्न भने जिवीतै छ– के सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बन्ला त ? (रासस)
प्रकाशित : शनिबार, असार २३, २०७५१९:४६
रहेनन् गणेश न्यौपाने ‘मुनाल’ ! दमका रोगी न्यौपानेको वीर अस्पतालमा निधन !
अवैधरुपमा कुखुरापालन गर्दै आएका फिलिपिन्स नागरिक पोखराबाट पक्राउ !
माओवादीका कार्यकर्ताले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कुर्सीमै आगजनी गरेपछि……
साँझ ५ बजे एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै
धर्म गुरु श्री निवासाचार्य २१ दिनपछि डिस्चार्ज, उपचार खर्च सरकारले व्यहाेर्ने
४३ सेकेन्ड अगाडि बिगुल